Xarunta Maaraynta Xogta Dhulka iyo Biyaha Oo La Dhagax Dhigay Hargaysa | Gabiley News Online
Xarunta Maaraynta Xogta Dhulka iyo Biyaha Oo La Dhagax Dhigay Hargaysa
Xubno ka mid aha golaha wasiirradda Somaliland ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarunta maaraynta xogta dhulka iyo biyaha oo laga hirgelinayo xarunta wasaaradda deegaanka ee maagaladda Hargaysa.
Muhiimadda ugu weyn ee ay xaruntani qaranka u qabanayso ayaa ah in shanta wasaarradood ee wada jirka u maamulayaa ay ururiyaan xogta la xidhiidha maaraynta xogta dhulka iyo biyaha, taasoo ay markii hore ururin jirtay haayadda qaramadda midoobay ee FOA.
Xaruntan maaraynta xogta dhulka iyo biyaha Somaliland ee maanta la dhagax dhigay waxaa hirgelinteedda maalgelinaya ururka midawga Yurub, iyo haayadda qaramadda midoobay u qaabilsan cuntadda iyo beeraha ee FOA.
Hirgelinta xaruntani maaraynta xogta dhulka iyo biyaha ayaa shaqadda ugu weyn ee ay qaban doontaa ka kooban tahay laba arrimood.
Kuwaasoo ay ka mid tahay in daraasado laga sameeyo dhulkeenu Juquraafi ahaan sida uu u kala duwan yahay, iyo sida uu u kala manfac roon yahay, iyadoo soo saari doonta daraasado ku qotoma arrimahaasi.
Sida ay sheegtay wasiirka deegaanka iyo horumarinta Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare, oo hadal ka jeedisay munaasibadii dhagax dhiga xaruntaasi.
Daawo: Hadalka Wasiir Shukri Baandare: